पाँचतारे होटलदेखि मोफसलसम्म फैलिँदै प्राकृतिक उपचार स्पा – Health Post Nepal
२०७५ चैत ९ गते १३:४७
मानसिक र शारीरिक तन्दुरुस्ती प्रदान गर्ने, शरीरका विषाक्त पदार्थहरू निकालेर शरीरमा सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न गराउने र तनाव कम गराउने प्राकृतिक उपचार विधि हो, स्पा ।पछिल्ला दिनमा उपचारदेखि जीवनशैली परिवर्तन तथा शौखका रुपमा समेत स्पाको प्रयोग बढ्दै गएको छ । प्रयोगसँग पाँचतारे होटलदेखि, पर्यटकीय स्थानमा समेत यसको बजार फैलिन थालेको छ ।
शारीरिक तन्दुरुस्ती र सौन्दर्यको क्षेत्रमा निकै महत्वपूर्ण मानिएको स्पाभित्र विभिन्नप्रकारका उपचार विधि समेटिएका हुन्छन् । स्पाथेरापी उपचारअन्तर्गत बाथ, स्टिमबाथ, आयुर्वेदिक मसाज, हटस्टोन मसाज, जोइन पेन रिलिफ मसाज, अकुप्रेसर थेरापी, शिरोधारा, ओफुरो, साउनालगायत पद्धति प्रचलित छन् । स्पाले प्राकृतिक चिकित्सासँग सम्बन्धित विभिन्न आयुर्वेदथेरापी, स्पाइनलथेरापी, शिरोधारा, साउनाबाथ, स्टिम बाथ, हटस्टोन मसाज, जोइन पेन रिलिफ मसाज, अकुप्रेसरथेरापी, ओफुरोलगायत प्राकृतिक चिकित्सापद्धतिहरू अपनाउने गरेको छ ।
नेपालमा व्यावसायिक स्पाको इतिहास लामो छैन । १२ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको स्पा पछिल्लो समय १ सय ५० देखि २ सय वटा स्पा सेन्टर तथा साना–ठूला गरी २ सयवटा मसाज सेन्टरमा विस्तार भएको छ, यद्यपि यसको यकिन तथ्यांक भने उपलब्ध छैन । धेरैजसो स्पा सेन्टरहरू काठमाडौंका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरू, पाँचतारे होटेल, ठमेलबजार तथा क्यासिनो क्षेत्रमा बढी मात्रामा केन्द्रित छन् । त्यसैगरी मोफसलका पर्यटकीय क्षेत्र तथा जिल्ला सदरमुकामहरूमा पनि स्पा सेन्टरहरू खोलिएका छन् ।
किन आवश्यक छ स्पा ?
आधुनिक समाजको विकाससँगै मानव जीवनमा पनि आधुनिकताको राम्रै प्रभाव परेको छ । यसले मानिसमा शारीरिक तथा मानसिक समस्याहरू थप्दै छ । बदलिँदो वातावरण, असन्तुलित खानपान, आवश्यक मात्रामा व्यायामको कमीजस्ता कारणले मानिसमा अनगिन्ती समस्या देखिन थालेका छन् । यस्ता समस्याबाट मुक्ति दिलाउन तथा प्रभाव कम गर्न पछिल्लो समय स्पाथेरापीतर्फ आकर्षण बढ्दो छ । स्पाले भित्री अंग तथा आउटलुकको मेन्टिनेन्सका साथै कुनै पनि केमिकलको प्रयोगविना प्राकृतिक तरिकाले पछिसम्मका लागि स्वास्थ्यलाई मेन्टेन गरी जिउने कला सिकाउँछ ।
ट्र्यान्क्युलिटी स्पाका निर्देशक राजेश फैँजू मानिसमा स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनेबारे मानिसमा चेतनाको विस्तार भएका कारण स्पातर्फ आकर्षण बढ्दै गएको बताउँछन् । ‘स्वस्थ जीवनशैली बनाउने विषयमा मानिसको चेतना वृद्धि भइसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘मानिसको अस्वस्थकर जीवनशैलीलाई स्वस्थ जीवनशैलीमा बदल्नु तथा शरीर र मनलाई सन्तुलनमा ल्याउनु नै स्पाको प्रमुख उद्देश्य हो । यो व्यवसायलाई उचित ढंगले व्यवस्थित एवम् व्यवसायीकरण गर्न सकेको खण्डमा अर्थतन्त्र तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्नेछ ।’
सुरुमा यसप्रतिको मानिसको गलत धारणाका कारण स्पाका लागि जनशक्ति पाउन पनि समस्या थियो,’ रियल थेरापीका सञ्चालक भवी शर्मा भन्छन्, ‘तर, अहिले रोजगारीको नयाँ अवसरका रूपमा विकसित भएको छ ।’
नेपालमा स्पाको अवस्था
मानसिक र शरीरिक तन्दुरुस्तीका लागि गरिने मसाजलाई नेपाली समाजमा अझै पनि नकारात्मक दृष्टिले हेरिन्छ । मसाज भन्नासाथ यौन वा गलत धन्दाका रूपमा अनुमान लगाउने सामाजिक रोग अझै विद्यमान छ । ‘सुरुमा यसप्रतिको मानिसको गलत धारणाका कारण स्पाका लागि जनशक्ति पाउन पनि समस्या थियो,’ रियल थेरापीका सञ्चालक भवी शर्मा भन्छन्, ‘तर, अहिले रोजगारीको नयाँ अवसरका रूपमा विकसित भएको छ ।’ स्पाको विश्वव्यापी रूपमा बजार बढेसँगै स्वदेशी तथा विदेशी सेवाग्राहीको संख्यामा पनि उल्लेखनीय वृद्धि हुँदै गएको उनको भनाइ छ ।
आयुर्वेद र स्पाको सम्बन्ध
स्पामा प्राकृतिक चिकित्सासँग सम्बन्धित विभिन्न आयुर्वेदथेरापी, एरोमाथेरापी, स्पाइनलथेरापी, शिरोधारा, साउनाबाथ, स्टिमबाथ, हटस्टोन मसाज, जोइन पेन रिलिफ मसाज, अकुप्रेसरथेरापी, ओफुरोलगायत प्राकृतिक चिकित्सापद्धति अपनाउने गरिएको छ । पहिले स्पालाई विलासिताको आवश्यकताका रूपमा लिइन्थ्यो भने अहिले नेसेसरी (आधारभूत आवश्यकता)का रूपमा लिने गरिएको छ । स्पा र आयुर्वेद दुवैलाई अल्टर्नेटिभ थेरापीका रूपमा लिन सकिने फैँजूको धारणा छ । आयुर्वेद उपचारमा आधारित हुन्छ भने स्पालाई रिल्याक्समा आधारित मानिन्छ । आयुर्वेदमा प्रयोग गरिने नियमहरू स्पामा पनि पालना गरी स्पाथेरापी सेवा दिइने हुनाले आयुर्वेद र स्पालाई एकीकृत रूपमा लिन सकिने फैँजू बताउँछन् ।
कत्तिको महँगो छ ?
स्पालाई ट्रिटमेन्ट र रिल्याक्स दुवै बेसमा लिन सकिन्छ । सेवाको यही प्रकृतिअनुसार स्पाको शुल्क लिने गरिएको छ । पछिल्लो समय सामान्य मानिसले पनि स्पाथेरापी लिन सक्ने सैँजू बताउँछन् । पहिले पाँचतारे होटेलहरूमा मात्र स्पासेवा सञ्चालन हुँदा धनी मानिसले मात्रै सेवा लिन सक्ने सोच आममानिसमा छ । तर, पछिल्लो समय स्पाले व्यावसायिक रूपमा व्यापकता पाएसँगै आममानिसले पनि स्पासेवा लिन सक्ने रियल थेरापीका सञ्चालक शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार अझै पनि स्पा सर्भिस महँगो छ भने गलत धारणा कायमै छ । ‘स्वास्थ्यको चासो राख्ने जोसुकैले स्पाथेरापी सर्भिस लिन सक्ने अवस्था छ,’ उनी भन्छन् ।
स्पा सर्भिसको निश्चित शुल्क तोकिएको छैन । स्पा सेन्टरले आफ्नो तरिकाले शुल्क लिने गरेका छन् । स्पा सेन्टरले लेबनअनुसार र उपचारको प्रकृतिअनुसार शुल्क लिने गरेका छन् । रियल थेरापीमा स्पा सर्भिस लिएबापत एक हजारदेखि सेवाअनुसार शुल्क तय गरिएको छ । ट्र्यान्क्युलिट स्पामा भने न्यूनतम ३ हजार शुल्क लिने गरेको सेन्टरले जनाएको छ ।
स्पाथेरापीका लागि अहिलेसम्म नेपाल सरकारबाट प्रमाणित कुनै कोर्स नभएको शर्मा बताउँछन् । ‘यसको रिसर्च गरेर विदेशमा चलाइएका कोर्सहरू र ट्रेनरसमेत झिकाएर ट्रेनिङ दिएर काम गरिरहेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘यसरी हामीले म्यानपावर तयार गरेका छौँ ।’ तयार भएका म्यानपावरले पछि अरुलाई ट्रेनिङ दिने गरेको शर्माले बताउँछन् । ‘स्पाका लागि आवश्यक कोर्स कुन हो भनी आवश्यक रिसर्च गरी कोर्स सञ्चालनसँगै शैक्षिक योग्यताको सीमा तोकिनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।
पठन–पाठन मात्र नभएर नेपालमा हालसम्म स्पासम्बन्धी कुनै कानुनी व्यवस्थासमेत छैन । तसर्थ, स्पा सञ्चालनका लागि घरेलु उद्योगमा दर्ता गरी सञ्चालनमा ल्याइँदै आएको छ । स्वस्थ्यरक्षाका लागि निकै उपयोगी मानिने स्पाथेरापी सञ्चालनका लागि कम्पनी दर्ता हेल्थ काउन्सिल, घरेलु उद्योग, प्यान वा भ्याट आदिमा दर्ता भई सञ्चालनमा ल्याउन सकिने व्यवस्था छ ।
केही अवस्थामा आधुनिक औषधि तथा अप्रेसनको पनि जरुरत पर्न सक्छ, तर ८० प्रतिशतभन्दा बढी रोगको सुरुवाती अवस्था औषधि तथा अप्रेसनसँगभन्दा पनि जीवनशैलीसँग नै सम्बन्धित हुन्छन् र पूर्णतया ठिक हुनेखालका हुन्छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार ७५ प्रतिशत मुटु तथा रक्तनलीका रोग, ७५ प्रतिशत मधुमेह रोग, ७५ प्रतिशत मस्तिष्काघात वा स्ट्रोक र ४० प्रतिशत क्यान्सररोगको पूर्ण रूपमा रोकथाम गर्न सकिन्छ । योग, प्राकृतिक चिकित्सा र जीवनशैली व्यवस्थापन नै यी रोगका निम्ति अन्तिम उपाय हुन् । किनकि, यी रोगबाट बच्ने वा उपचार गर्ने उपाय मात्र होइनन्, जीवन जिउन सिकाउने कला पनि हुन् ।
योग, प्राकृतिक चिकित्सा, जीवनशैली चिकित्सा एवम् आयुर्वेदबाट यी रोगको प्रभावकारी उपचार र रोकथाम सस्तो शुल्कमा गर्न सकिन्छ । केही अवस्थामा आधुनिक औषधि तथा अप्रेसनको पनि जरुरत पर्न सक्छ, तर ८० प्रतिशतभन्दा बढी रोगको सुरुवाती अवस्था औषधि तथा अप्रेसनसँगभन्दा पनि जीवनशैलीसँग नै सम्बन्धित हुन्छन् र पूर्णतया ठिक हुनेखालका हुन्छन् ।
प्रायः नसर्ने रोगको रोकथाम र रोगमाथि विजय पाउने सबैभन्दा सजिलो, सस्तो र भरपर्दो उपाय नै योग, प्राकृतिक चिकित्सा, जीवनशैली व्यवस्थाप र आयुर्वेद हुन् ।
स्पा सेन्टरको डिजाइन
स्पा सेन्टरको डिजाइनमा पाँचतारे होटेलहरू तथा ठूला स्पा सेन्टरहरूले निकै ठूलो रकम खर्च गरेको पाइन्छ । स्पा सेन्टर छिर्नेबित्तिकै मानिसमा छुटै आनन्द आउनेखालको सजावट गरिएको हुन्छ । महँगा पेन्टिङ, आकर्षक चित्र तथा वस्तुहरूले भित्ता सजिएका हुन्छन् ।